Iwe unoda kutora chikamu mu World World inotevera? - World March
Iwe unoda kutora chikamu mu World World inotevera?
musha » Iwe unoda kutora chikamu mu World World inotevera?
Nyika Inofanirwa Rugare uye Kusagutsikana isangano rezvemagariro evanhu richazotanga rwendo rwechipiri rweOctober 2 2019. Yekutanga Nyika yeKurusi yakaitwa mugore re2009 uye vakakwanisa kusimudzira Inenge zviitiko zvine chiuru mune mamwe maguta anopfuura 400. Chiitiko chakakosha icho muZviri Yenyika yechipiri iwe unoda kusvika zvakare uye kukurira.
Nyika Yakave Yakave Norugare Nekusagadzikana yakarongeka nemagadziro ane maonero evanhu, akapararira munyika yose, nechinangwa chimwechete chekusika nekuwedzera kukuziva kwekudiwa kwenharaunda dzenyika kuti urarame murugare nekusava nehanya .
Uye nokuda kweizvi zvakakosha kuti vatsva vatori vechikamu vabatanidze hutsva hutsva. Kana iwe uri mumwe wavo uye uchida kutiziva zviri nani, tinokukoka kuti uone webhu, kuti uverenge zvinyorwa zvakasiyana zviri mairi.
Tichawana rubatsiro rworudzii?
Sezvo World March for Runyararo uye Noviolence, isu takasununguka kune imwe nhengo, sangano rekubatana kana kana munhu mumwe nomumwe, kubva kupi zvako munyika, anoda kushamwaridzana nesu kuti titsigire chirongwa ichi zvakare. Sezvataurwa pamusoro apa, kufamba kunotanga 2 yaOctober ye2019 uye ichafamba-famba pasi rose, kuguma March 8 we2020.
Neichi chiito chekutora chikamu tinoda kuti vanhu kana masangano anoratidzirwa nehurongwa uhwu, vanobatana mumhemberero kuburikidza nekuita mabasa akafanana mumazuva ayo rwendo runopera.
Izvo zvose zviito nezviito zvinenge zvisingabatsiri, kureva kuti, hapana yekurudziro yezvemari, uye kuurayira kunofanira kumhanya pachako.
Tiri kutsvaga masangano kana vanhu vakazvipira kune chikonzero chacho uye vanoda kugovera pamwe nekugadzira mutsara wekutaurirana zvakananga nevanoronga.
Izvo zviitiko zvinofanira kukurudzirwa zvinofanira kukurudzirwa kuunza pamwe nhamba yakakwana yevanhu (vana kana vanhu vakuru), kunyanya vatori vechikamu 20 ndiyo yakanaka.
Kana iwe uchida kutora chikamu, asi iwe hauna pfungwa yeimwe basa, tichakurukura newe kuti utaure mimwe mienzaniso yezvingaitwa. Asi zvirevo zvinogonawo kutsanangurwa uye zvakanyatsogadziriswa nemunhu ane mhosva yezviito chero bedzi zvavari mukati mehutano hwehutsika hweMarch.
Iwe uchakumbirwa kusarudza zuva rinobva 2 kubva munaOctober kubva 2019 kusvika ku8 kubva muna March we 2020, kujekesa basa rakasarudzwa uye izvo zvinogona kuva chikamu chekufamba kwepasi rose kuri kuitwa. Zvichienderana nezuva ratinobvumirana naro, basa racho richava chikamu chekufambisa kukuru, kana kuti inogona kuva chikamu chekufamba kwechipiri.
Pane imwe nguva yakanyoreswa iwe uchawana email kune kero ye email yawakatsanangura, iyo yatinozotanga kuonana nayo kupa humwe ruzivo, uye kuedza kuunganidza mashoko anodiwa kuti tiite basa racho kubudirira.
Iyo nguva dzose inokosha kuva nezvinhu zvekuona zvakatsigira (mifananidzo kana mavhidhiyo), kuitira kuti vagone kugoverwa pahutaneti uye mumagariro evanhu vehutano, saka vachigadzira zvinyorwa zvezuva rino rezvakaitika kare.
Nzira yekuve chikamu chechikwata chei?
Vose avo vanhu kana shamwari dzinoshuva kuzvipira kuita zviitiko zviduku kana zviitiko mumazuva ayo marwendo achange apera, zvinongoda kuvhara pane bhatani rekubatanidza uye kusiya data yako kuitira kuti tive nekutumira iwe nge email, saka tichajekesa zvinodikanwa uye tinogona kupa dzimwe pfungwa pamusoro pemabasa aifanira kuitwa.
Tsunga uye shandisa izvi
Tisiye isu kugoverana kwako deta
Zita uye mazita emunhu wacho kana zita resangano
Munhu mumwe nomumwe
Boka kana Sangano
Guta State / Province / Region
AfuganisitaniAland IslandsArubhaniyaArujeriyaAmerican Samoathe nationalAngolaAngwiraAntarcticaAndiguya neBhabhudhaArgentinaArumeniyaArubha OsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniBhahamasiBhahareniBhangiradheshiBarbadosBherarusiBherujiyamuBelizeBeninBhemudhaBhutaniBorivhiyaBonaire, Sint EUSTATIUS uye SabaBhoziniya neHezegovhinazimbabweBouvet IslandBhuraziriBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarrussalamBharugeriyaBurkina FasoBurundiKambodhiyaKameruniKanadhaKepu VhedhiCayman IslandsYepakati Ripabhuriki AfrikaChadhiChileChinaChristmas IslandCocos IslandsKorombiyaKomorosiCongo, Democratic Republic ofCongo, ZimbabweZvitsuwa KukuKosita RikaCôte d'IvoireKiroshiyaKiyubaCuraçaoSaipurasiCzech RepublicDhenimakiJibhutiDhominikaRipabhuriki DhominikaEkwadhoEgyptE SavhadhoIkwetoriya GiniEritreaEspañaEsitoniyaEswatini (Swaziland)IthiyopiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinirendiFuranziFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJerimaniGhanaGibhurataGirisiGirinirendiGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiYakanzwa uye McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHangariAisirendiIndiaIndonezhiyaIranIrakiAyarendiVechiwi ManIzirayeriItariJamaikaJapaniJerseyJodhaniKhazakisitaniKenyaKiribatiKuwetiKijisitaniLao vanhu Democratic RepublicRativhiyaRebhanoniLesothoRaibheriyaRibhiyaLiechtensteinRituaniyaRukuzemubhoguMacauMasedhoniyaMadhagasikaMalawiMarazhiyaMarudhivhuMaliMaltaZvitsuwa MasharoMartiniqueMauritaniyaMorishiyasiMayotteMekisikoMaikironezhiyaMorodhovhaMonakoMongoriyaMondenegiroMotseratiMorokoMozambikiMyanmarNamibhiyaNauruNeparoNetharenziNew CaledoniaNyuzirendiNikaraguwaNaijaNaijeriyaNyu Tsitsuwa NofokuMawodzanyemba KoriyaMaodzanyemba Zvitsuwa MariyanaNoweyiOmaniPakisitaniPalauPalestine, State ofPanamaPapa Nyu GiniParaguayPeruFiripainirhodesiaPorendiPutugaroPota RikoKwataRéunionRomaniyaRashiyaRwandaSaint BarthélemySendi HerenaSendi Kitsi ne NevhisiSendi RusiyaSaint MartinSaint Pierre uye MiquelonSendi Vincent neGirenadhiniSamoaSan MarinoSayo Tomu nePurinzipuSaudhi ArabhiyaSenegalSerbiaSecheresSierra LeoneSingapowoSint MaartenSirovhakiyaSirovhinyiyaZvitsuwa SoromoniSomariaChamhembe AfrikaSouth GeorgiaChammhembe KoriaSouth SudanShiri RangaSudhaniSurinameSvalbard uye Jan Mayen IslandsSiwidheniSiwizarendiSiriyaTaiwanTajikisitaniTanzaniaTairendiTimor-LesteTogoTokerauTongaTrinidhadhi neTobhagoTunisiyaTekiTekimenisitaniVokuTurkey zveTurks IslandsTuvaluUgandaUkireniMubatanidzwa Arabhu EmeretsiUnited Kingdomnyika dzakabatanaUruguayUS Minor Outlying IslandsUzebhekisitaniVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis uye FutunaWestern SaharaYemeniZambiazimbabwe
Ratidza Nyika Yako
Iwe unoda kusiira meseji here? (kusarudza)
Iyi iframe ine chinyorwa chinodiwa kuchengetedza mafomu uye yakashandiswa ajax.